Xog: Waa kuma ninka halista weyn ku noqday Xaaf ee uu ka dhaqaaqi waayay? | Baahin Media
Xog: Waa kuma ninka halista weyn ku noqday Xaaf ee uu ka dhaqaaqi waayay?
Xaaf dagaalka uu ku jiro waa mid ka adag midka ay ku jiraan madaxda maamulada kale ee dalka waxa uuna maamulkiisa ku reebay raadad xun oo ay adag tahay sida looga soo kabto. Khilaafka ugu weyn waxa uu kala dhaxeeya DF Soomaaliya, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Badweyn Online ayaa heshay xog ku saabsan in Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabeey uu yahay qatarta ugu weyn ee Xaaf. Waxyaabaha ayaa ogaatay Badweyn Online waxaa kamid ah in Carabeey uu ku guuleestay baajinta dhamaan heshiisyadii uu galay Madaxweyne Xaaf.